Dhaqamada kirismaska ​​ee Cuba | Safarka Absolut
Dhaqamada kirismaska ​​ee Cuba
Daniel | | La cusboonaysiiyay 28/01/2021 11:07 | Cuba
Astaamaha gaarka ah ee dalkan awgeed, ayaa Kirismaska ​​Cuba Way ka yara duwan tahay kuwa looga dabaal dago waddamada kale ee Latin Amerika. Dawladii shuuciga ahayd ee Fidel Castro mamnuucay dabaaldeggan 1959, laakiin soddon sano ka dib xaddidan ayaa la qaaday oo dadka Cuba waxay awood u yeesheen inay soo ceshadaan dhaqammadii iyo dabaaldegyadii had iyo jeer.
Soo noqoshada "rasmiga ah" ee Kirismaska ​​jasiiradda waxay dhacday 1998, iyadoo booqashadii Pope John Paul II ee Cuba. Waxay ahayd markaa dowladda Kuuba, iyada oo gacan-ka-hadal dhex dhexaadin ah la leh Holy See, ay ku dhawaaqday 25-ka Diseembar inay tahay maalin ciid ah. Fikradda waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey dadka, oo doonayey inay soo ceshadaan mid ka mid ah xisbiyadooda ay aadka u jeclaayeen ee aan weligood la iloobin.
Laakiin xitaa iyadoo ay taasi jirto, Kirismaska ​​Cuba waa ka duwan yahay. Waxaa loogu dabaaldegaa si xamaasad leh oo farxad leh sida caadiga ah Cuba, in kasta oo ay ka madhan tahay diirimaadka meelaha kale iyo, inbadan, qaybteeda diimeed. In kasta oo maamulku u oggol yahay dabaaldegyada, haddana iyagana kuma jiraan. Tusaale ahaan, waa dhif iyo naadir in la helo qurxinta Kirismaska ​​ama la dhagaysto muusikada carol-ka oo laga xuso magaalooyin iyo magaalooyin ka tirsan jasiiradda oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn sida La Habana, Trinidad, Cienfuegos o Santiago de Cuba.
1 Xisbiyada Kirismaska
1.1 The Parrandas de Remedios
1.2 Charangas-ka Bejucal
2 Kirismaska ​​ee Cuba: gastronomy
Ciidda Kirismaska ​​ee Cuba ayaa lagu xusaa midab iyo xamaasad badan. Tusaalooyinka ugu wanaagsan ee qaabkan ku noolaanshaha ciidaan waxaa laga heli karaa laba goobood: Villa Clara y Bejucal
Inta lagu jiro usbuuca ka hor Kirismaska ​​ee Villa Clara xafladaha San Juan de los Remedios ayaa dhacaya, kuwaas oo leh muujiyadooda ugu midabada badan waxa loogu yeero xafladaha, ayaa lagu dhawaaqay Dhaxalka aan la taaban karin ee Aadanaha by UNESCO.
Dhaqanka parrandas wuxuu dhashay qiyaastii laba boqol oo sano ka hor. Dadka magaalada degan ayaa u qaybsan labada dhinac: El Carmen iyo San Salvador. Labada kooxba si adag ayey usbuucii oo dhan ushaqeeyaan si ay uqaabeeyaan dabaasha iyo dharka ugu xiisaha badan.
Habeen walba ilaa Ciidda Kirismaska Labada xisbi ayaa loo bilaabay inay socod ku maraan waddooyinka dhawaqa muusikada iyo rashka, oo ku tartamaya laxanka, farxadda iyo muujinta. In kasta oo labadoodaba ay u tartamaan inay noqdaan kuwa ugu fiican, haddana cid guuleysata lama sheego. Ujeedada kaliya ayaa ah in la baashaalo, sida ka muuqata fiidiyowgaan (qoraaga waa Juan Manuel Pacheco):
Bandhigani waa mid ka mid ah kuwii ugu da'da weynaa jasiiradda isla markaana wakiil ka ah sida Kirismasku ugu nool yahay Cuba. Waxay ka bilaabmaysaa sanadihii xilligii gumaysiga, halkaas oo caado u ahayd inay sayidyadu addoommadooda siiyaan 24-ka Diseembar maalin fasax ah. Addoomada madow, oo asal ahaan ka soo jeeda Afrika, ayaa ku riyaaqay nasashadan yar qoob-ka-ciyaarka iyo garaacista durbaankooda.
Dabaaldegyada maanta xoogaa waa ka duwan yihiin. Magaalada Bejucal Waxay u qaybsan tahay laba xargaha naxaas: dhinac ka mid ah ka ah Ceiba Qalinka, kaas oo soo bandhigaya midabka buluuga ah iyo jaantuska hangaralka oo ah astaamo, iyo kan kale oo ah Qodaxda Dahabka ah, kaas oo ku duulaya midabka casaanka ah iyo boorarka leh ciyey diiq. Sida Remedios parrandas, waa tartan aan soo jiidanaynin dad yar oo soo booqda Habeenkii Kirismaska.
Kirismaska ​​ee Cuba: gastronomy
Maaddaama aysan si kale noqon karin, ayaa guntinimada ku yaal meel aad muhiim ugu ah dabaaldega Kirismaska ​​ee Cuba. Taariikhahaani waa waqtiga qoysaska iyo asxaabtu isugu yimaadaan miiska, iyadoon loo eegin midba midka kale dareen diimeed. Marka laga hadlayo qoysaska rumaysan, cashada ayaa xilli hore ah si looga qaybgalo Saqda dhexe.
Doofaarka duban ama doofaarka nuuga waa saxanka xiddigta ee cashada Kirismaska ​​iyo cuntooyinka Cuba.
Magaalooyin badan oo jasiiradda ka mid ah habeenkiina wuxuu ku dhammaadaa bandhig rashyo. Kan ka dhaca Paseo del Malecón, oo ku taal Havana. Waxaa jira dalxiisayaal badan oo u yimaada meeshan si ay ugu raaxaystaan ​​xilligan.
Saxanka xidigta ee Cuban Christmas Christmas-ka ayaa ah doofaar la dubay ama doofaar nuugaya, oo ahmiyaddiisu ay lamid tahay tan turkey ee duban dalalka Anglo-Saxon. Hilibka waxaa badanaa lagu siiyaa suugooyin kala duwan iyo wehello bariis cad, digir madow, salad, Pan o yucca in mojo, Cunnooyinka caadiga ah ee Cuba ee taariikhahaas. Qaybta macmacaanka, waa inaan ku xusnaa kuwa soo jireenka ah friters iyo qolof liinta.
Ma jirto dhaqan xididkiisu qoto dheer yahay hadiyadaha isdhaafsadaan ha ahaanin cashada Kirismaska ​​ama qadada kirismaska. Si kastaba ha noqotee, waa wax caadi ah in xafladda lagu dhammeeyo muusig, qoob ka ciyaarka iyo ruug badan, qaabka ugu nadiifsan Cuba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhaqamada kirismaska ​​ee Cuba
Maalinta Jacaylka, sida ay sheegeen Talyaanigu
Sable sable, khasnadda xoolaha Ruushka